Midnimo Jaceyl - QeyloNET Somali Media Portal
Keywords:Midnimo Jaceyl musalsal
Midnimo Jaceyl waa musalsal aad u xiiso badan oo aad ka daawan kartid qeylonet.com. Musalsalkaan oo xambaarsan sheeko jaceyl, farxad iyo murugo. Welibana aad uxiisa badan waxaad goordhow asagoo dhameystiran ka daawan kartaa qeylo.net
Midnimo Jaceyl 315 Dhamaad
Midnimo Jaceyl 314
Midnimo Jaceyl 313
Midnimo Jaceyl 312
Midnimo Jaceyl 311
Midnimo Jaceyl 310
Midnimo Jaceyl 308
Midnimo Jaceyl 307
Midnimo Jaceyl 306
Midnimo Jaceyl 305
Midnimo Jaceyl 304
Midnimo Jaceyl 303
Can you plz add more episode plzzzzzz
Musasalka midnimo jaceyl
Fadlan jacaylki kirada noosoo galiya idinkoo mahdsan please
Neiw maxd ka yar yaraynysaan noo soo wadada yah neiw yaaadeh waad lagu hungurinysaneh in bdn ayan sugayey dhanka iyo filmska Turkey ah layma daareh plz soo dhamystirah kadipnah nooso dhigah de 🤨🤗😌
Xilimad so galini dontan qabta 168?? Lakin waxa kugoran inad sogalisan 190 halqadod. Sababna??
Ilaa 190 waa xaqiijiney inaan gaarsiin karno. Inkastoo aysan diyaar wada ahayn.
please asaaska nolosha nosoo fasax
Midimo jaceyl 161
qoor me la so deynaya????
Wllyalow musalsalkan inbadan ba kadhiman mad noso dhamaystirtam
Musalka waa la dhamystri doonnaa dulqaata pz
Maxaa idinku dhacay meesho bilood idin sugaayaa
Goormaa lasoo dhameed tiraayaa qeyba 161 please
Wll plz noso galiya ????
Musalsal kaan waan kaheley❣
GoormA lasoo dhamees tiraa
Filinka gorma la soo dhamaystirayaa
wll mcn grn mayo wxa ku dhcy lkn madawan karyo
wll mcn grn mayo waxa ku dhcy lkn ima sheeqynyo
Wllo aad iyo aad ayd u mhdsn tihin. Wlhi halkan Australia ayn idinka dawada. Thank you
Seedai baa qualities loo badala
Musalsalkaan goorma ayaa dhacdo cusub soo socota
Waxan idinka codsanayna inad nosogelisan DHAQTARKII MUCJISADA oo dhameytiran wll ????????????
Waxan idinka codsanayna inad nosogelisan DHAQTARKII MUCJISADA oo dhameytiran wll
Waxan idinka codsanayna inad nosogelisan DHAQTARKII MUCJISADA oo dhameytiran wll????????????????
Asc wllo filmka iima shaqaynayo maxaan sameeyaa si aan u fiirsado.
Hunoyal Maxa idinku dhagay away qayibti 161 ee musalsal kaa Midnimo Jaceyl iyo qaaybahi kale? Nooso daaya please
Belo filin fiican
Qeybta 61 goor mee lasoo galinaa
Midnimo jaceyl maad joojiseen ?
Sxbayal markan dhax galnay hanugu kala goynina bilaa caleyk. 161?
Noso dhamestira plc
Asc asxabta Midnimo jacel please no sodaaya????
yessssss aad iyo aad ayaad umahadsantihiin ???? noo soo wada ????????
Please midnimo jaceyl 161 please
De huuno mee 161 bisinkee
Walalayaal musalka midnimo jacyl qor me la so daynaya 161
Please gepta 161 please
Qaylo net waxaad tihiin rag shaqo diyaar uah cimaamadiina waa iska tuuray keep going walaalayaal
Muzalzalkaan weli lama sogelin miyaa
Khamiista 8 October ayaa lasoo gelinaayaa
Waxaan raba in aaan kala socdo halkan musalsalo badan oo kale diwaan
Asago dhamaysa goorma la soo galin doona